Downloads 12 790
Nosedraina OK niaraka FSX SP2 + FSX-SE
Mpanoratra: Brett Henderson, Alejandro Rojas Lucena
Ny Convair CV-580 dia fiovàna avy amin'ny fiaramanidina Convair CV-340 na CV-440 miaraka amin'ny môtô motera roa Allison 501 D13D / H ho solon'ireo milina mpanao pistôn, ny lavaka fanitarana ny lavaka ary ny fiovaovan'ny horizontale. Ny fifanakalozan-dresaka dia notontosain'ny Pacific Airmotive tamin'ny anaran'ny Company Allison Engine.
Vahiny FSX modely ny Convair 580. Hiakam-pitiavana VC tanteraka miasa izay novaina avy amin'ny Convair 240 VC. Dinamika sy asa fanamboarana ny tena zava-misy. Ny sary mihetsika feno dia ahitana ny tohatra fitahirizam-bokatra. Autor: "Niezaka ny haka ny toe-tsaina rambo, taloha ary turbo-prop aho." Aty telo tafiditra ao anatin'izany ny vintage, North Central Airlines, Frontier Airlines, ary ny kontraktoran'ny entana maoderina, DHL.